बेल्जियमबाट फर्किएकी बाग्लुङकी अंशुको तेस्रो रिपोर्ट पनि ‘पोजेटिभ’ ! «
बेल्जियमबाट फर्किएकी बाग्लुङकी अंशुको तेस्रो रिपोर्ट पनि ‘पोजेटिभ’ !
Published : 14 April, 2020 5:54 pm
कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारमा रहेकी बागलुङकी १९ वर्षीया अंशु सापकोटाको तेस्रो परीक्षणमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। गण्डकीको प्रयोगशाला र काठमाडौंबाट पनि पोजेटिभ देखिएको हो।‘सुरुमा हामीले पोखरामा टेष्ट गर्‍यौं। यहाँ पोजेटिभ देखियो। त्यसपछि काठमाडौं पठाएर टेष्ट गर्दा उता पनि पोजेटिभ नै देखिएको छ,’ गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले भने, ‘उहाँको लगातार तेस्रो पटक पोजेटिभ देखिएको हो।’
आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत उनको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पोजेटिभ रिपोर्ट आएसँगै दुवैजनाको अस्पताल बसाई अझै लम्बिने भएको छ। तेस्रो परीक्षणका लागि १ साता अघि उनको स्वाब लिइएको थियो।यो खबर आजको ताजासमाचारमा छापिएको छ |